Xaflad balaadhan oo ay kuwada cawaysimeen Qurba-joogta ka kala Timid dhamaanba Qaaradaha Aduunka iyo Qaran-joogta DDSI oo ka dhacday Caawa Hoolka SMCX looma kala hadhin caawa. - Cakaara News
Xaflad balaadhan oo ay kuwada cawaysimeen Qurba-joogta ka kala Timid dhamaanba Qaaradaha Aduunka iyo Qaran-joogta DDSI oo ka dhacday Caawa Hoolka SMCX looma kala hadhin caawa.
Jigjiga(CN) Axad August-3-2015.Waxaa caawa ka dhacday munaasabad qaran oo si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay kuwada cawaysimeen Qurbajoogta ka soo jeeda DDSI ee ka kala timid Qaaradaha Yurub,Ameerika,Australia,Asiya iyo Afrika iyo qaran-joogta oo uu ugu horeeyo Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Cabdi Maxamuud,Ku-xigeenada madaxwaynaha,Golaha capinetka iyo qaybaha bulshada deegaanka.
Xafladaa oo ahayd mid si meeqaam sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qaybgalay masuuliyiinta xukuumada DDSI ugu saraysa oo uu ka mid yahay madaxwaynaha DDSI mudane cabdi maxamuud cumar, madaxwayne ku xigeenka DDSI ahna wasiirka waxbarashada DDSI mudane mawliid haayir xasan golaha capinetka DDSI golaha wasiirada DDSI,
dhamaanba qurba joogta DDSI ee kala timiday qaaradaha Aduunka ee wakhti xaadirkan u sugan xarunta DDSI iyo waliba marti sharaf kale.
Xafdasaasi oo ahayd mid mid lagu maamuusayay qurba-joogta u dhalatay DDSI ayaa waxaa ka hadlay madaxwayna DDSI mudane cabdi maxamuud cumar ayaa sheegay in xafladan oo lagu maamuusayo soo dhawaynta qurba joogta DDSI ay ku soo beegan gan tahay wakhti guulo waawayn oo wax ku ool ah laga soo hooyay qorshihii koboca dhaqaalaha iyo isbadalka 1aad ee GTP1 loona diyaar garoobay hirgalinta qorshaha koboca dhaqaalaha iyo isbadalka 2aad ee GTP2 taasi oo ah mid dalka iyo deegaankuba la rabo in ay si dhaw ugu biiraan wadamada uu dhaqaalahoodu dhex dhexaadka yahay.
Wuxuuna madaxwaynuhu si qoto dheer ugu nuux nuuxsatay guulihii laga soo hooyay qorshaha GTP1 haddi ay ahaan lahayd xidhiidhka qurba joogta kor u qaadida kaabayaasha dhaqaalaha isgaadhsiinta laydhka arimaha ka qaybgalka haweenka iyo dhamaanba adeegyada horumarineed.
Dhanka kale wuxuu madaxwaynuhu ku booriyay qurba joogta DDSI in ay ka faa’iidaystaan fursadaha maalgashi ee uu deegaanku hodanka ku yahay.
Waxaa kale oo ka hadlay xafladaasi dhamaantoodna u mahadceliyay xukuumada DDSI iyo XDSHSI bogaadiyayna waxqabadka balaadhan ee laga taabogaliyay dhinacyada horumarka,nabadgalyada,maamulka suuban iyo xidhiidhka qurbajoogta madaxda jaaliyadaha ee wadamada Yurub,Ameerika,Imaaraadka carabta iyo australia.
sida diiran ee loogu soo dhaweeyay deegaanka ka hadlay xaaladaha horumarineed ee sida Xafladan ayaa waxaa kaalin lixaad leh ka qaadanayay dhanka madadaalada Kooxaha Deegaanka iyo Fanaaniinta caanka ah ee Nimco wadani(Dareen) iyo Nimco yaasiin.